विदेशमा अपराध नेपालमा अनुसन्धान ! - Everest Dainik - News from Nepal
विदेशमा अपराध नेपालमा अनुसन्धान !
एक नेपाली युवालाई टर्कीमा अपहरण गरेर बंगलादेशमा फिरौती असुल गरिएको घटनाको प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ । नेपाल प्रहरीको पहलमा अपहरणकारीको बंगलादेशमा रहेको बैंक खाता रोक्का गरिएको छ । इन्टरपोलमार्फत प्रहरीले अपहरणकारी पक्राउ गर्न पहल गरेको छ ।
रुकुमका झलक नकाल ६ महिनाअघि टर्कीको इस्तानबुलमा अपहरणमा परेका थिए । नौ हजार अमेरिकी डलर दिएपछि उनलाई मुक्त गरिएको थियो । फिरौती भने बंगलादेशमा लिइएको थियो । नकालले नेपाल फर्किएर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)मा उजुरी गरेपछि घटनाको अनुसन्धान अघि बढाइएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत फिरौती लिइएको रकम बैंकमा रोक्का राखिएको र अपहरणकारीलाई कारबाही गर्न टर्कीको प्रहरीसँग कुरा भइरहेको सिआइबीका एसएसपी शेरबहादुर बस्नेतले बताए ।
रुकुम मुसिकोटकै प्रकाश वलीमार्फत झलक नकाल एक वर्षअघि भिजिट भिसामा टर्की गएका थिए । जसमा उनको १२ लाख रुपैया“ खर्च भएको थियो । वली टर्कीमा बस्दथे । उनले इस्तानबुलमा जागिर लगाइदिए । तर, सम्झौताअनुसार तलब नपाएपछि उनले छाडिदिए । अर्काे जागिरको खोजीमा रहेका वेला उनै वलीले अर्काे जागिर मिलाइदिने भन्दै उनलाई भेट्न डेरामा आए । उनीसहित तीनजना भारतीयलाई कम्पनी हेर्न लैजाने भन्दै एक घरमा पुर्‍याई बन्धक बनाएर पैसा माग्न थालियो । एक साता बन्धक बनाएपछि कोरियामा रहेका आफ्ना दाइमार्फत उनले नौ हजार अमेरिकी डलर पुबाली बैंकमा पठाएका थिए ।
पैसा पठाएर रिहा भएपछि उनले प्रहरीमा उजुरी गरे । तर, टर्कीको प्रहरीले चासो नदिएपछि उनी नेपाल फर्किए । सिआइबीले प्रकाश वलीसहित बंगलादेशी नागरिकहरू मोहम्मद अनवर मलिक र मोहम्मद मनन मलिकविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । ‘उनीहरूविरुद्ध रेड कर्नर नोटिस जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ,’ एसएसपी बस्नेत भन्छन्, ‘उनीहरूलाई नेपाल ल्याएर कारबाही गर्ने प्रयासमा छौँ ।’ टर्कीको प्रहरीसँग पनि कुरा भइरहेको सिआइबीले जनाएको छ । नेपाल प्रहरीकै पत्राचारका आधारमा फिरौती पठाइएको बंगलादेशको पुबाली बैंकमा रहेको मनन मालिकको खाता पनि रोक्का गरिएको छ । उनको खातामा सात लाख तीन हजार ८९ बंगलादेशी टा“का रोक्का छ । इन्टरपोलको सहयोगमा सो पैसा फिर्ता ल्याउने प्रक्रियासमेत परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नेपाल प्रहरीले अघि बढाएको छ ।
विदेशमा भएको अपराधको नेपालमा अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गरिएको यो पहिलो घटना होइन । विगतमा पनि नेपाल प्रहरीले विदेशमा भएका अपराधको नेपालमा अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरेको छ । तीन वर्षअघि नेपालका मेनपावर व्यवसायी रामप्रसाद नेपालको मलेसियामा अपहरण भएको थियो । व्यापारसम्बन्धी छलफल गर्न भन्दै मलेसिया बोलाएर अपहरण गरी फिरौती मागिएको थियो । जुन घटनाको पनि सिआइबीले अनुसन्धान गरेको थियो । जसमा संलग्न कमल गौलीलाई सिआइबीले नेपालबाटै पक्राउ गरी अपहरण मुद्दा दायर गरेको थियो । अपहरणकारीले उनलाई चढाएको गाडी दुर्घटनामा परेका वेला उनी भागेर नेपाल आएका थिए ।
त्यस्तै, ग्रिसमा अपहरणमा परेका संखुवाभासमा कृष्ण गुरुङलाई पनि नेपाल प्रहरीकै पहलमा अपहरणमुक्त गराएको थियो । अपहरितका आफन्तले नेपालमा उजुरी गरेपछि ग्रिसको प्रहरीलाई आग्रह गरी गुरुङलाई मुक्त गरी अपहरणकारीलाई पक्राउ गराउन सफल भएको थियो ।
तीन वर्षअघि थाइल्यान्डमा गएर नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो । तीन नेपाली विद्यार्थी अपहरणमा परेको सिआइबीका एक अधिकारी थाइल्यान्ड गएरै अनुसन्धान गरेका थिए । फिरौती बुझेर थाइल्यान्ड पठाउन खोज्ने सुजन यादवलाई नेपालमा पक्राउ गरी अपहरण मुद्दामा कारबाही गरेको थियो । उनले अपहरणमा परेका एक विद्यार्थीको परिवारबाट एक करोड रुपैयाँ लिएर हुन्डीमार्फत पठाउने प्रयास गरेका थिए । ‘जुनसुकै ठाउँमा बसेर अपराध गरे पनि अब जोगिन गाह्रो छ,’ सिआइबीका एसएसपी बस्नेत भन्छन्, ‘जुनसुकै देशमा बसेर अपराध गरे पनि नेपालमा अनुसन्धान र कारबाही गर्न सक्ने भएका छौँ ।’
प्रहरीमा हटेन घुमुवा विकृति
संघीय प्रहरी इकाइ जनकपुरमा कार्यरत असइ रामरेखा यादव र हवल्दार राजीव पटेल अकस्मात् मुख्यालय झिकाइएका छन् । त्यस्तै, जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका हवल्दार बच्चा यादवलाई पनि मुख्यालय तानिएको छ ।
प्रहरी मुख्यालयमा आवश्यकता परेर नभई गम्भीर उजुरी परेपछि अनुसन्धानका लागि उनीहरूलाई झिकाइएको हो । अहिले १ नम्बर गणमा राखेर उनीहरूमाथि छानबिन भइरहेको छ । व्यापारीहरूलाई धम्क्याएर रकम असुलेको तथा आपराधिक समूहसँग मिलेको आरोप उनीहरूमाथि छ । स्थानीय व्यवसायीले नै उजुरी गरेपछि प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयअन्तर्गत रहेको उजुरी छानबिन इकाइले उनीहरूमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । उनीहरू हाकिमको विश्वासपात्र बनेर सादा पोसाकमा कार्यरत थिए ।
प्रहरीविरुद्ध महानिरीक्षकको सचिवालयमा दर्जनौँ उजुरी
देशभरिकै प्रहरीविरुद्ध महानिरीक्षकको सचिवालयमा दर्जनौँ उजुरी परेका छन्, जसमध्ये झन्डै आधाजसो सादा पोसाकमा काम गर्ने घुमुवा प्रहरीविरुद्ध छन् । त्यसमा पनि धेरै तराईका जिल्लामा कार्यरत घुमुवा प्रहरीविरुद्ध छ । पछिल्लो दुई महिनामा मुख्यालयले तराईका सातजना सादा पोसाकमा काम गर्ने प्रहरीलाई निलम्बन गरिसकेको छ । कतिपयलाई त्यहाँबाट हटाइएको छ । प्रहरीमा उजुरी र छानबिन सामान्य प्रक्रिया भएको प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी मनोज न्यौपाने बताउँछन् । सूचना संकलनका नाममा हाकिमहरूले गोप्य रूपमा परिचालन गर्ने घुमुवा प्रहरीहरू प्रहरीभित्रको भ्रष्टाचारको प्रमुख कारण बन्दै आएका छन् ।
याे पनि पढ्नुस अपराध लुकाउन नाम र धर्म नै परिवर्तन
घुमुवा प्रहरीका कारण प्रहरी संगठनकै छवि बिग्रँदै गएको छ । उनीहरू विभिन्न घटनामा मुछिँदै आएका छन् । गत माघमा अपराध महाशाखाका सइ सम्बत लामा र सूर्य लामाले मेनपावर व्यवसायी बद्री राईको अपहरण गरेका थिए । चैतमा घटना बाहिर आएपछि उनीहरू पक्राउ परेका थिए । दुवै सादा पोसाकमा कार्यरत थिए ।
दुई वर्षअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालय बा“केका एसपी शेखर कोइराला घुमुवा प्रहरीकै कारण निलम्बनमा परेका थिए । घुमुवा प्रहरी सइ सुमन खरेल घुससहित पक्राउ परेपछि अख्तियारले उनलाई पनि निलम्बित गरेको थियो । चार वर्षअघि काठमाडौं परिसरमै कार्यरत घुुमुवाले सुन लुटेका थिए ।
मिलेमतोमा सुपारी तस्करी प्रकरणमा अञ्चल प्रहरी कार्यालय नारायणीका सइ राजेश यादवलाई गत वर्ष क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय हेटौँडाले निलम्बन गरेको थियो । त्यस्तै, पर्साकै मर्टिअवा चौकीका घुमुवा प्रहरी हवल्दार नागेन्द्र बैठा बर्खास्तमै परेका थिए । क्षेत्रीय प्रहरी प्रमुखका रूपमा आफूले हेटौँडामा काम गर्दा एक दर्जनभन्दा धेरै घुमुवा प्रहरीलाई कारबाही गरेको डिआइजी गणेश केसी बताउँछन् । तराईका सबै जिल्लाका प्रहरीविरुद्ध अहिले मुख्यालयमा उजुरी परेको छ । अन्य जिल्लामा पनि घुमुवा प्रहरीहरू पटकपटक विवादमा तानिने गरेका छन् ।
इन्टेलिजेन्स ब्युरो अन्योलमा
सूचना संकलनका नाममा हाकिमको निकट भएर सादा पोसाकमा काम गर्ने ‘घुमुवा प्रहरी’ हटाउन तीन वर्षअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयले थालेको काम अलपत्र परेको छ । घुमुवा प्रहरीका कारण बदनाम भएको भन्दै सूचना संकलनका लागि इन्टेलिजेन्स ब्युरोअन्तर्गत परिचालन गर्ने योजना थियो । अहिले पनि देशभरिका प्रहरी कार्यालयमा सादा पोसाकमा घुमुवा प्रहरी कार्यरत छन् । जो सूचना संकलन र अपराध अनुसन्धानभन्दा बढी हाकिमलाई खुसी बनाउन केन्द्रित हुने गर्दछन् । बदनाम भएकै कारण उनीहरूलाई इन्टेलिजेन्स ब्युरोको कमान्डमा सञ्चालन गर्ने योजना बनेको थियो । अपराध अनुसन्धान विभागअन्तर्गत डिएसपीको कमान्डमा इन्टेलिजेन्स ब्युरो बनेको छ, तर उसको काम प्रभावकारी छैन ।
दुई वर्षभित्र कुल प्रहरी जनशक्तिको १० प्रतिशत अपराध–अनुसन्धानमा खटाउने योजना तीन वर्षअघि नै बनेको थियो । जुन अहिले ५.२५ प्रतिशतमै रोकिएको छ । अपराध अनुसन्धानको पुरातन शैलीलाई परिवर्तन गरी विशेषज्ञता दिन अपराध अनुसन्धान समूह गठनको प्रक्रिया अघि बढेको थियो । उनीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता दिनेसमेत प्रस्ताव गरिएको थियो । सुरुको कार्ययोजना पारित भए पनि त्यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन । सो कार्ययोजना बनाउने सुरेन्द्रबहादुर शाह हाल गृहमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार छन् ।
प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागले बनाएको कार्ययोजनाअनुसार अहिलेसम्म देभभरिका घुमुवा हटिसक्नुपर्ने हो । विभागले तयार पारेको योजना सबैबाट स्वीकृत भई लागू गरेको थियो । सूचना संकलन र मुद्दा शाखाका प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धान समूह गठन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो । जुन यतिवेला अलपत्र परेको छ ।
देशभरिका सबैजसो प्रहरी कार्यालयमा सूचना संकलनका लागि भनेर सादा पोसाकमा प्रहरीहरू कार्यरत छन् । कतिपय स्थानमा उनीहरूले राम्रो काम गरे पनि केही स्थानमा सूचना संकलनभन्दा पैसा संकलनमा केन्द्रित हुने भएकाले प्रहरीमा बदनाम छन् । प्रायः एउटै कार्यालयमा काम गर्ने खराब व्यक्तिहरूसँग उनीहरूको सम्बन्ध हुने गर्दछ । उनीहरूमार्फत नै प्रहरीका हाकिमहरूले ‘सेटिङ’ मिलाएर पैसा असुल्ने गरेका छन् । आफैँ पैसा लिँदा जोखिम धेरै हुने भएकाले प्रहरीका हाकिमहरूले घुमुवामार्फत नै पैसा असुल्ने गरेका छन् । कारबाहीमा परे पनि घुमुवा मात्र पर्ने भएकाले प्रहरीमा यस्तो विकृति नरोकिएको हो ।
८८ किलो सुन बरामदको घटनामा शंकास्पद भूमिका खेलेको भन्दै महानगरीय प्रहरी वृत्त लैनचौरका डिएसपी दीपक पोखरेललाई महानगरीय प्रहरी परिसरले स्पष्टीकरण सोधेको छ । सुनबारे सूचना पाएर पनि बरामद गर्न चासो नदेखाएको भन्दै महानगरीय प्रहरी कार्यालयको निर्देशनमा परिसरले स्पष्टीकरण सोधेको हो । गत सोमबार बिहान क्षेत्रपाटीबाट महानगरीय अपराध महाशाखाले ८८ केजी सुन बरामद गरेको थियो । त्यसबारे महानगरीय प्रहरी कार्यालयले पहिले नै लैनचौर वृत्तलाई खबर गरी बरामद गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, डिएसपी पोखरेलले त्यसमा गम्भीरता नदेखाएको भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको परिसरका एक अधिकारीले बताए । पोखरेल गत महिना मात्र वृत्तमा सरुवा भएका थिए । सुनका मालिक मानिएका चिनियाँ नागरिक पनि प्रहरीबाटै सूचना पाएर भागेको आशंका गरिएको छ ।
एक किलो सुनसहित ताइवानी पक्राउ
एक किलो सुनसहित ताइवानी नागरिक पक्राउ परेका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयले क्याथे ड्रागन एअरको उडानद्वारा हङकङबाट काठमाडौं आएका ताइवानी नागरिक चिएचुन चाङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । भन्सारको एक्सरे चेकिङका क्रममा उनी पक्राउ परेको एयरपोर्ट भन्सार प्रमुख नारायण सापकोटाले बताए । झोलामा लुकाएको अवस्थामा सुनका २७ वटा टुक्रा फेला परेको थियो ।
सुन करिब एक किलो रहेको सापकोटाले बताए । कुनै समूहले बाहकका रूपमा उनलाई तस्करीमा प्रयोग गरेको प्रहरी आशंका छ । चाङको नेपालमा पनि कुनै समूहसँग सम्बन्ध रहेको आशंकामा थप अनुसन्धान अघि बढाइएको सापकोटाले बताए । एक महिनाअघि दुई किलो सुनसहित भन्सारमा दुई बाहक र एक प्रहरी पक्राउ परेका थिए । -नयाँ पत्रिकाबाट